Ithegi: ukusetyenziswa kwegama elingundoqo | Martech Zone
Maka: ukusetyenziswa kwegama elingundoqo
NgoLwesibini, Matshi 23, 2021 NgoLwesibini, Agasti 24, 2021 Douglas Karr
Ngamanye amaxesha abathengisi abakwazi ukubona ihlathi lemithi. Njengokusebenza kweinjini yokukhangela kuye kwafumana ingqwalaselo enkulu kule minyaka ilishumi idlulileyo, ndiye ndaphawula ukuba abathengisi abaninzi bagxila kakhulu kwinqanaba nakwizithuthi ezithengiswayo, bayalilibala inyathelo elenzeka phakathi. Iinjini zokukhangela zibaluleke kakhulu kwishishini ngalinye 'ukukwazi ukuqhuba abasebenzisi ngenjongo kwiphepha elikwisiza sakho esondla injongo yemveliso okanye yenkonzo yakho. Kwaye meta
Indlela yokusebenzisa amagama aphambili ngokukuko kwi-SEO nangakumbi
NgoLwesibini, Oktobha 17, 2017 NgoLwesibini, Oktobha 17, 2017 Douglas Karr
Iinjini zokukhangela zifumana amagama aphambili kwizinto ezahlukeneyo zephepha kwaye uzisebenzise ukumisela ukuba iphepha kufuneka libekwe kwiziphumo ezithile okanye hayi. Ukusetyenziswa ngokuchanekileyo kwamagama aphambili kuya kwenza iphepha lakho libhekiswe kukhangelo oluthile kodwa akuqinisekisi ukubekwa okanye inqanaba ngaphakathi kolo phendlo. Kukho ezinye zegama eliphambili iimpazamo zokuphepha. Iphepha ngalinye kufuneka lijolise kwingqokelela eqinileyo yamagama aphambili. Ngokoluvo lwam, akufuneki ubenalo iphepha
NgoLwesine, Agasti 23, 2012 NgeCawa, ngoSeptemba 8, 2013 Douglas Karr
Ndifumene le imeyile: Ndive uDouglas ethetha kwiBhlog yaseIndiana malunga nokuba i-SEO ifile njani kwaye amagama aphambili akabalulekanga njengokuba ebekade enjalo. Uqinisekisa njani ngokufanelekileyo abathengi ukuba benze oku? Ngaba unomdla ekuthatheni kwakho. Qaphela: Ngelixa amagama aphambili engabalulekanga… kusabalulekile ukusebenzisa amagama aphambili. Sichitha ixesha elininzi kunye nabaxhasi bethu kuphando lwamagama aphambili. Isilayidi endabelana ngaso nabaphulaphuli kuso
6 Amagama aPhambili aPhambili eGunyazisiweyo
NgoLwesithathu, Aprili 18, 2012 NgoMvulo, Februwari 8, 2016 Douglas Karr
Njengoko siqhubeka singena nzulu kuphando olunzulu kunye nabathengi ngohlobo lwamagama aphambili atsala ukugcwala kwetrafikhi, sifumanisa ukuba iinkampani ezininzi zinoluvo oluphosakeleyo xa kufikwa kuphando olusetyenzisiweyo kunye nokusetyenziswa. Iphepha elinye linokubeka amanqanaba ngamagama aphambili. Abantu bacinga ukuba bafuna ukuba nephepha elinye ngegama ngalinye elingundoqo abanqwenela ukujolisa kulo… Akunjalo. Ukuba unephepha elikoluhlu